Qiimaha tayada shiilan ee Saliida bilaashka ah ee ugu fiican ▷ TOP 5 ee 2022
Tristar Oil Fryer Free
ka saliidaha aan saliida lahayn Tristar waa mid ka mid ah xulashooyinka tayada/qiimaha ugu wanaagsan hadda Ma waxaad raadinaysaa tusaale isaga oo awood u leh inuu daboolo baahiyahaaga oo dhan? Markaa doorashadayada maanta adigaa leh!
Waxaan ogaanay sumadda Tristar aqoonsiga wanaagsan ee qaybta, sidaa darteed ma joojin karno falanqaynta sida ugu wanaagsan ee sumaddan Nederlaan ay bixiso.
Maqaalka maanta waxaan ku daryeeli doonaa inaan kuu sheegno wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u iibsato ugu fiican: sifooyinka muhiimka ah, faa'iidooyinka, khasaarooyinka, fikradaha, iwm. Aan aadno halkaas
Shiilanyada Saliidda Cecotec ee Xorta ah
➤ barbardhiga saliida Tristar ee bilaashka ah
Waa maxay Fryer-ka bilaashka ah ee saliidda Tristar ee ugu fiican?
Laga soo bilaabo buug-gacmeedka ballaaran ee calaamadda waxaan doorannay 5 moodooyinka ugu fiican ee xilligan waxaanan kaga hadlaynaa si faahfaahsan hoos.
Naqshad is haysta si aanu shiilaynku u qaadan meel aad u badan guriga ama safarka
Ku habboon shiilitaanka, dubista, dubay iyo dubay iyada oo ay ugu wacan tahay isku-xidhka hawada ee xawaaraha sare leh
Natiijo qallafsan oo dheeraad ah xitaa iyada oo aan la isticmaalin saliid
Badbaado in lagu isticmaalo gacan qabasho qabow, ilaalin kulayl badan, iyo saldhig aan simbiriirixan lahayn
Fudud in lagu xakameeyo analoogga kontoroolka oo leh garaac wareeg ah waqtiga iyo heerkulka
Awoodda: 2 litir
Makiinada weelka lagu dhaqo oo badbaado leh: Maya
BPA bilaash ah: Haa
Cabbirada: Dhererka 30 x Qoto dheer 25 x Ballac 25 cms qiyaastii
Kani waa nooc leh cabbir is haysta oo ku habboon jikada kasta. Waxay ku habboon tahay lammaanaha ama qoysaska yaryar oo leh awooddeeda 2-litir, taas oo ku filan inay diyaariso qiyaastii laba jeer markiiba.
Waxaad si dhakhso ah u shiilan kartaa, duban kartaa, karin kartaa ama dubayn kartaa iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda 1000 watt taas oo sidoo kale kuu ogolaan doonta inaad gaarto heerkulka ugu fiican ee cunto kasta. Waa in la ogaadaa in heerkulka la taageeray uu yahay 80 ° C iyo 200 ° C.
Qalabkani waxa uu leeyahay oo kaliya kontoroolka analooga ah si uu u dejiyo saacada ama heerka heerkulka, taas oo ka dhigaysa habka karinta mid la taaban karo.
Waa doorasho badbaado leh, maadaama ay leedahay ka-hortagga kulaylka waxayna bixisaa badbaado badan iyada oo ay ugu wacan tahay gacanteeda qabow-taabashada.
▷ Tristar FR-6989 Crispy XL Fryer
FR-6989 Crispy XL Qiimaha
Naqshad is haysta si aan fryerku u qaadan meel aad u badan, laakiin uu leeyahay awood weyn oo ah 3,5 litir. Iyada oo awood ah 1500W, markaa waxay ku kululaan doontaa daqiiqad gudaheed
Ku habboon shiilan, dubista, dubay iyo dubay iyada oo ay ugu wacan tahay isku-xidhka hawada xawaaraha sare leh, diyaarinta wax kasta laga bilaabo muffins ama buskudka ilaa digaaga, baradhada, khudaarta ama kalluunka
Natiijo qallafsan oo dheeraad ah xitaa iyada oo aan la isticmaalin saliid ama la isticmaalin wax yar oo keliya
Badbaado in lagu isticmaalo gacan qabasho qabow, ilaalin kulayl badan, iyo saldhig aan simbiriirixan lahayn. Way fududahay in lagu koontaroolo analoogga kontoroolka leh oo leh garaacyada wareega ee wakhtiga iyo heerkulka
Si loo fududeeyo isticmaalka, shiilaya hawadu waxay leedahay dahaar aan dhejis ahayn. Dambiilaha la saari karo ayaa xitaa fududeynaya nadiifinta shiilan isticmaalka ka dib
Awoodda: 3,5 litir
Functions: shiil, dubay, karinta iyo dubay
Cabbiraadyada: Dhererka 31 x ballac 27 x qoto dheer 30 cms qiyaastii
Qaabkan oo leh nidaamka khaanadaha la saari karo waxa uu awood u leeyahay in uu diyaariyo ilaa 4 xabbo taas oo ay ugu wacan tahay mugga 3,5-litir ah. Waad ku mahadsan tahay habka karinta hawada kulul, waxay bixisaa suurtogalnimada diyaarinta cuntooyin badan oo la dubay, dubista, dubista ama dubista.
Awooddeeda 1500 watts waxay ilaalin doontaa heerkulka saliidda muddo dheer, taas oo dammaanad qaadaysa natiijooyin aad u fiican. Intaa waxaa dheer, markaad karineyso cuntadaada, waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u maareyso qalabka iyadoo ay ugu wacan tahay aagga taabasho qabow.
Qalabka kontoroolka analooga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku hagaajiso heerkulka inta u dhaxaysa 80 ° C ilaa 200 ° C, iyo sidoo kale waxay ku siinaysaa suurtogalnimada in wakhtiga wax lagu karsado wakhtigeeda. Sidaa darteed, dhammaan suxuuntaadu waxay yeelan doonaan qaabka la rabo iyada oo aan la isticmaalin saliid.
Fryer Crispy FR-6956 Qiimaha
Waad ku mahadsan tahay awoodda weyn ee 4.5 litir, waxaad isticmaali kartaa shiilan oo aan saliid lahayn qoyska oo dhan
Waxay leedahay guddi kontorool oo dhijitaal ah oo leh shaashad LCD taasoo ka dhigaysa mid aad u fudud in la isticmaalo
Dooro mid ka mid ah 8 hab oo horay loo sii qorsheeyay ama u deji wakhtiga karintaada iyo heerkulkaaga. Waxaad dooran kartaa heerkul u dhexeeya 80⁰C iyo 200⁰C iyo wakhti ilaa 60 daqiiqo ah. Awoodda 1500 W waxay u oggolaanaysaa in la kariyo ilaa 1.2 kilo oo cunto ah hal mar
Farsamaynta hawada kulul waxay ogolaataa shiil, dubayn, dubayn iyo dubid. Waxaad si fudud u diyaarin kartaa shiilan faransiis ah, hilib ama kalluun, khudaar, ismaris, duub, muffins, keega ama bur bur
Badbaadada dheeraadka ah waxaa mahad iska leh ilaalinta kulaylka badan, gacan taabasho qabow iyo saldhig aan simbiriirixan lahayn. Waxay ku daraysaa dahaar aan dhejis ahayn oo ay fududahay in la ilaaliyo oo la nadiifiyo. Maaddaama ka saarista dambiilaha mashiinka shiilan ay aad u fudud tahay, nadiifinta wakhtina qaadan mayso
Awoodda: 4,5 litir
Functions: shiilan, karkarin, dubay ama dubay
Cabbirada: Dhererka 35 x Balladhka 31 x Qoto dheer 30 qiyaastii
Awoodda dheeraadka ah ee qaabkani waa mid ka mid ah sifooyinka ugu fiican, maadaama ay kuu ogolaanayso inaad kariso ilaa 1,2 kg oo cunto ah qoyska oo dhan. Waxay bixisaa suurtogalnimada shiilan, dubista, dubista ama dubista, sidaas darteed waxay suurtogal noqon doontaa in la diyaariyo cuntooyin kala duwan oo leh natiijooyin wanaagsan.
Waxay isku daraysaa heerkulka u dhexeeya 80 ° C iyo 200 ° C, isagoo awood u leh inuu si degdeg ah u gaaro heerkiisa ugu sarreeya iyada oo ay ugu wacan tahay 1500 watts oo awood ah. Intaa waxaa dheer, si habka karinta looga dhigo mid la taaban karo, waxay leedahay saacad la hagaajin karo ilaa 60 daqiiqo.
Waxay leedahay guddi kontorool shaashadda LCD digital ah oo dareen leh oo sahlan in la isticmaalo. Dhexdeeda waxaad ku samayn kartaa dhammaan isbeddelada u dhigma wakhtiga iyo heerkulka, sidoo kale waxaad dooran kartaa mid ka mid ah 8-da barnaamij ee karinta ee diyaarsan.
Qiimaha FR-6996 Crispy XXL
Shiilan saliid la'aanta ah ee XXL ayaa ku habboon qoyska oo dhan iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda weyn ee 5,2-litir. Suxuuntaadu si dhakhso leh ayey u kariyaan iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda 1800W
Heerarka hawada sare ee xawaarahiisu wuxuu ogol yahay karinta, shiilidda, shiilan iyo dubay
Badbaadsan in lagu isticmaalo gacan qabasho qabow, ilaalin kulaylka badan, bannaanka kulaylka u adkaysta, iyo sal aan simbiriirixan lahayn. Fudud in lagu xakameeyo analoogga kontoroolka leh oo leh garaacyada wareega ee wakhtiga iyo heerkulka
Awoodda: 5,2 litir
Functions: Dubo, shiil, dubay oo dubay
Cabbirada: Dhererka 36 x Balladhka 33 x Qoto dheer 33 cms
Tani waa mid kale oo ka mid ah fursadaha ugu fiican marka aan raadineyno shiilan qoyska oo dhan, iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda 5,2-litir. Sidan, waxay noo ogolaan doontaa inaan shiilno, dubno, dubno ama dubno ilaa 1 kg oo cunto ah.
Xawaaraha karinta ee cuntooyinkaagu waxay noqon doontaa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan, maadaama haysashada 1800 watts oo awood ah ay ilaalin doonto heerkul joogto ah oo ku filan saxan kasta.
Si loo xaqiijiyo natiijooyinka ugu wanaagsan, waxaad haysataa laba garaac oo ku yaal guddiga kontoroolka analoogga ah: mid saacad-eeyaha iyo mid dejinta heerkulka u dhexeeya 80 ° C iyo 200 ° C. Markaa waxaad dooran kartaa tan ugu habboon uguna habboon habka karinta ee cuntadaada.
▷ Tristar FR-6964 Fryer Fryer foornada
Qiimaha FR-6998 Fryer Fryer
Thanks to 10-keeda barnaamij ee horay loo rakibay, Tristar FR-6964 foornada kala duwan waxay kuu ogolaaneysaa inaad diyaariso dhammaan noocyada suxuunta: hilibka, kalluunka, rootiga, khudaarta la dubay, pizzas, keega iyo shiilan Faransiiska.
Awooddeeda 10 litir (0,9 kg ee baradhada) iyo awoodda 1800 W, waxaad u karin kartaa qoyska oo dhan dhibaato la'aan; Isku-xidhka hawada xawaaraha sare wuxuu bixiyaa cunto karin degdeg ah oo isku mid ah
Bandhigeeda dhijitaalka ah aad bay u fududahay in la isticmaalo: dooro barnaamijka aad u baahan tahay ama gacanta ku deji saacadeeyaha (1-60 daqiiqo) iyo heerkulka (80-200 ° C)
Waxyaabaha lagu daro waxaa ka mid ah: dambiilaha shiilan ee Faransiiska oo leh gacan taabasho qabow, 2 raakidh iyo saxaarad jajab ah
Waad ku mahadsan tahay dhammaan xulashooyinka ay bixiso, waxaad diyaarin kartaa qayb weyn oo ka mid ah shiilan Faransiis ah waqti yar oo aad uga mahadcelineyso dambiilaha wax lagu shiilo, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku dubto khudaarta ama bowdada digaaga ee foornada si raaxo leh adigoo isticmaalaya muraayadaha. Adigoo isticmaalaya gacanteeda, waxaad si fudud uga saari kartaa dambiisha shiilan iyo shalefyada foornada adigoon is gubin.
Awoodda: 10 litir
Barnaamijyada la heli karo: 10
Functions: shiil iyo dubista
Makiinada weelka lagu dhaqo oo badbaado leh: Haa, kaliya qaybaha la saari karo
BPA bilaash ah: Lama cayimin
Cabbiraadyada: Dhererka 38 x ballac 36 x qoto dheer 35 cms qiyaastii
Tani waa nooc cusub oo, marka lagu daro shiilan, waxay sidoo kale ina siinaysaa suurtogalnimada samaynta suxuunta la dubay ee macaan. Waxa ugu xiisaha badan waa cabbirkeeda is haysta, taas oo iyaduna bixisa awoodda 10 litir.
Waxay leedahay kontoroolka analoogga ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad hagaajiso wakhtiga ilaa 90 daqiiqo iyo heerkulka karinta inta u dhaxaysa 30 ° C iyo 200 ° C. Thanks to 1500W ee awoodda, waxay si dhakhso ah u kululaan kartaa, iyadoo bixinaysa heerkulka ugu fiican ee cunto kasta.
Waxa ay haysaa 10 barnaamij oo cunto karin ah oo loo habeeyey noocyo kala duwan oo cunto karin ah, oo ay ku jiraan kalluunka, keega, pizza, rootiga, shiilan Faransiiska, digaaga iyo qaar kale. Intaa waxaa dheer, iyada oo ka ilaalinaysa kulaylka iyo qaboojinta taabasho, waxay hubin doontaa badbaadada ugu badan.
➤ Qiimaha Fryers Tristar Hot Air
Fryers Tristar-kan ayaa ku qiimeeya mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican, in kasta oo aysan ahayn astaan ​​sumcad leh, waxay dammaanad qaadaysaa heer tayo wanaagsan waxayna ka tirsan tahay koox la aqoonsan yahay oo sidoo kale leh Princess.
Marka la eego, qiimaha shirkaddani aad ayuu uga hooseeyaa noocyada kale ee caalamka laga aqoonsan yahay sida Philips ama Tefal.
➤ Mifreidorasinaceite Gabagabada iyo Fikradaha
Noocyada nooca Tristar waxay leeyihiin sifooyin xiiso leh oo u dhigaya heerka tartamayaasha waaweyn ee qaybta. Waxay bixiyaan saamiga tayada / qiimaha soo jiidashada leh, markaa la yaab maaha inay fikrado aad u wanaagsan ka heleen isticmaalayaasha.
Marka la eego arrintan, Amazon waxay heshay dhibcaha 4,4 ee 5, taas oo si fiican uga hadlaysa shirkadda iyo tayada qalabkan. Intaa waxaa dheer, macaamiishu waxay sameeyeen in ka badan 1.000 qiimeyn, kuwaas oo 68% ay yihiin kuwo togan oo muujinaya qanacsanaanta.
Dhinacyada ugu caansan ee ra'yiga isticmaalayaashu waxay ahaayeen fududaynta isticmaalka iyo nadiifinta, awooddeeda wanaagsan / saamiga tayada iyo suxuunta macaan ee ay maareeyaan inay helaan isticmaal kasta ka dib.
Habka karinta degdega ah
Ma sii daayo qiiq ama ur
Kuma jiraan daaqad si loo arko habka karinta (marka laga reebo qaabkii u dambeeyay)
▷ Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo:
Iyadoo ay jiraan shakiyo? Hoos waxaan ka jawaabi doonaa su'aalaha ugu badan ee iibsadayaasha.
Waa maxay dammaanadda la heli karo? 2 sano
Ma samayn kartaa cunto barafaysan? Haa, laakiin si macquul ah waxay qaadan doonaan wax yar ka badan inta ay dhalaalayaan
Ma tahay inaad saliid ku shubto? Dhammaan lagama maarmaan ma aha oo qaado ayaa ku filnaan doonta
Ma shiili kartaa kalluunka? Sí
Sidee loo shiilaa? Habka karinta ee qalabkan waxaa lagu fuliyaa kulaylka ay bixiso iska caabbinta korantada. Sidan oo kale, hawada soo gelaysa ayaa loo kululeeyaa oo ku dhex wareegtaa cuntada lagu tallaalay lakab khafiif ah oo saliid ah. Dhammaadka habka waxaan heli doonaa cuntooyin leh qaab-jilicsan iyo cod dahabi ah oo aad u macaan. Si kastaba ha noqotee, maadaama aan loo karinin habka caadiga ah, dhadhanka cuntadu ma ahaan doono mid isku mid ah oo ma noqon doonto mid qallafsan sidoo kale.
➤ Iibso Fryer-ka Saliid la'aanta ah ee Tristar
Haddii aad jeceshahay mid ka mid ah moodooyinka summada, waxaad ka heli kartaa kaaga qiimaha ugu fiican khadka tooska ah halkan:
Tristar FR-6994 Deep Fryer
Tristar FR-6989 Deep Fryer
(Codadka: 3 Celcelis: 3.7)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Tristar